crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> June | 2020 | HimiloNetwork
Himilo June 8, 2020	Leave a comment 469 Views
MUQDISHO (HN) –– 34 jir isaga oo yar laga iibsaday qoys aan ilmo dhalin oo ku nool 1,000 fogaan u jirta degmadii uu ku dhashay ayaa dib ula midoobaya labadiisa waalid kuwaas oo aan marnaba ka quusan raadintiisa. Mao Yin wuxuu jiray laba sanno markii qafaashe uu bishii October 17, 1988 si aan la fahmi karin uga xaday waalidkii dhalay. Isaga ...
Halima Adan oo hoggaaminaysa Ol’olaha Face Mask for Hijab
Himilo June 4, 2020	Leave a comment 330 Views
MUQDISHO (HN) –– Xilli dunidu dadaalkii ugu weynaa ay kula jirto xakameynta faafista xanuunka Covid-19, gafuurxirku waa waxyaalaha ugu muhiimsan oo looga hortagi karo. Balse isbitaallo badan maheli karaan, in kale oo dadka caadiga ah kamid ahna way ku adag tahay inay iibsadaan. Laakiin hadda, Hey’adda Unicef ayaa wadda ol’ole ay horboodayso Halima Adan oo ah gabar dharka xayaysiisa. Ujeedada ...
Himilo June 3, 2020	Leave a comment 257 Views
MUQDISHO (HN) –– Waxaa jiray warar ku-tiri-ku-teen ah oo sheegaya in sannadkan Xajka loo baajin doono xanuunka Covid-19 awgiis. Bishii April, sarkaal Sucuudi ah ayaa weydiin galiyay haddii Muslimiinta sannadkan qorsheystay gudashada Xajka ay dib u dhigan karaan. Laakiin, ilaa hadda qoraal rasmi ah oo arrintaas ku aadan kama soo bixin dowladda Sucuudiga. Balse sida laga soo xigtay Jakarta Post, ...
Himilo June 1, 2020	Leave a comment 378 Views
BEIJING (HN) — Qoys Shiinaha ku nool ayaa dacwad ka gudbinaya shirkad sameysa muqaallada game-ka ay carruurtooda ku ciyaaraan kaddib markii laba carruur ah oo ay dhaleen ku sigteen inay u dhintaan fal ku dayasho ah oo ay ka arkeen game-ka. Ilmahan ayaa isku dayay inay dhismo weyn uga dul boodaan dhismo kale – tallaab u muuqata inay kaga dayanayeen ...
Himilo June 1, 2020	Leave a comment 307 Views
BEIJING (HN) — Warbaahinta Shiinaha ayaa tebinaysa sheekada gabar qalbi-jabkii ay ka qaaday qiyaanada saaxiibkeed ku dhaqaaqday fal aargudasho kii ugu la yaab badnaa. Haweeneyda oo la yiraahdo Miss Zhao, oo ku nool Zibo waxay hadyad ahaan guriga saaxiibkeed ugu soo dirtay kun kiilo oo basal guduud ah — iyada oo ku tiri ‘ku ilmeey jarjaristeeda.’ Tani aya daba socda ...
Himilo June 1, 2020	Leave a comment 327 Views
DELHI (HN) — Saxaafadda Hindiya ayaa tebinaysa sheekada nin dacwad ka gudbiyay shirkadda Google qeybteeda ‘goobeynta’ Google Map – isaga oo yiri: “Waxay noqotay aalad ay xaaskaygu igu raadgurto mar kasta oo aan guriga ka baxo.” R Chandrasekhar, oo 49 jir ah ayaa sheegay in afadiisa iyo isagu ay halis ugu jiraan inay guurkoodii soo jiray gu’aal badan uu ku danbeeyo ...
Himilo June 1, 2020	Leave a comment 230 Views
LONDON (HN) — Waqti Xanuunka Covid-19 uu dunida ku baahayo, siinta ama sadaqadu waa mid aad loogu baahi badan yahay. Intii lagu jiray bisha Ramadaan, Masjidka Jaamaca ee Rizvia ee magaalada Burton ayaa 3500 oo xeerooyin ah waxay u qeybinayeen dadka ayaanka liita iyo nugulka bulshada ku jira. Iyaga oo isticmaalaya jikada Masjidka, samafalaaysha ayaa – iyaga oo sooman – ...
Himilo June 1, 2020	Leave a comment 352 Views
MUQDISHO (HN) — Seyniska ayaa maanta daah rogay xaqiiq uu Islaamku 14 qarni kahor dhaqan ahaan ugu booriyay Muslimiinta. Dhoolla-caddeyta ama muusoodka waxay daawo caafimaad u leedahay nolosha qofka. Waxayna furfuraysaa unugyada ay qanjiradu ku taagan yihiin. Haddiise aysan taasi kugu filneyn, waxaa kale oo la ogadaay inay sirta cimri dheerida qofka ay qeyb ka tahay. Jabir bin Abdillah ayaa ...
Himilo June 1, 2020	Leave a comment 418 Views
MANDINA (HN) — Muslimiinta ku nool gudaha magaalada Madina ayaa hadda loo ogolaaday inay ku tukan karaan gudaha Masjidka Nabiga NNKH kaddib ku dhawaad 70 maalmood oo xanuunka Corona awgiis albaabada la iskugu dhiftay. Masjidka Suubanaha ayaa kamid ah 90,000 oo masaajid oo gudaha Sucuudiga Arabiya ku yaal kuwaas oo loo xiray si loo yareeyo faafitaanka xanuunka Covid-19. Taniyo markaas ...
Sawirro – Farshaxan-yaqaan reer Portugal oo Dunida ka yaabsaday!
Masjidka Lhasa – Mid kamida Masaajidda ugu dheerdheer Adduunka.